तपाईको आज (विहिबार) को राशिफल भन्छ-आज यी आठ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
मेष -चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम, दाम र इनाम कमाउने बेला छ । रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त होला ।
बृष -इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
फजुल खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ । अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ । अवसरका लागि निकै दौडधुप पनि गर्नुपर्ला । प्रयत्न गर्दा यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला । फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला । व्यवसायमा आफ्नो मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन् ।
मिथुन -का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । मिहिनेत गर्दा आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन् । तर धेरै फाइदा उठाउन भने नसकिएला । केही रकम हातलागी भए पनि तत्काल खर्चनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । श्रमको राम्रै मूल्यांकन भए पनि उपलब्धि तत्कालै प्राप्त नहुन सक्छ । पछिका लागि जिम्मेवारी भने प्राप्त हुनेछ । सरसापट वा कर्जामार्फत आवश्यक रकम पनि जुट्नेछ ।
कर्कट- हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
तारिफयोग्य कामको चर्चा हुनेछ । अवसरले पछ्याउनेछन् भने कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ । मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ । प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । नोकरी तथा व्यवसायतर्फ मनग्य फाइदा हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नेछन् । कामले धेरैको मन जित्न सकिनेछ । रुचिका विषयमा लगानी बढाउन पनि सकिनेछ ।
सिंह -मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ । नयाँ काम थालनी हुनेछ । सानो प्रयत्नले दिगो काम सम्पादन गर्न सकिनेछ । साथीभाइले सहयोग जुटाउनेछन् । धार्मिक तथा सामाजिक काममा मन जानेछ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन् । पेसा तथा व्यवसायमा फाइदा हुने समय छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । मिहिनेतले जीवनशैलीमा समेत सुधार ल्याउन सकिनेछ ।
कन्या- टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । बेसुरको निर्णयले समस्या आउला। बलजफ्तीले काम बिग्रन सक्छ । परिस्तिथिवश काममा केही ढिलासुस्ती हुन सक्छ । अप्रिय समाचारले मन खिन्न बनाउला । अध्ययनमा पछि परिनेछ भने व्यापारमा सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ । नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुहोला । नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला ।
तुला -र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
रमाइलो समय छ । मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । तर, मनोरञ्जनमा अलमलिँदा काममा पछि परिनेछ । लोकाचारका लागि आतिथ्य खर्चिलो बन्न सक्छ । वादविवादमा अघि नसर्नुहोला । धैर्यसाथ प्रयत्न गर्दा नयाँ परिवेशमा नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफन्तबीच आत्मीयता बढ्नेछ । व्यावसायले रमाइलो यात्रा गराउन सक्छ । नयाँ जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुनेछ ।
बृश्चिक -तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । आफ्नै प्रयासले अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काममा जुट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ । प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । भौतिक साधन जुट्नाले फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरू किनारा लाग्नेछन् भने द्वन्द्व र मुद्दामा पनि आफ्नो पक्ष सबल बन्नेछ ।
धनु -ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
अध्ययन र पेसामा प्रगति गर्ने समय छ । विद्यार्थीहरूका लागि विशेष उपलब्धि हासिल हुनेछ । मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ । पहिलेको कमजोर नतिजा पनि सच्याउन सकिनेछ । व्यापार–व्यवसायमा पनि राम्रो फाइदा हुनेछ । तत्कालको निर्णयले नयाँ काम सुरुवात हुन सक्छ । शुभचिन्तकहरूले साथ दिने हुँदा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
मकर -भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
फाइदा हेर्दा नाम बिग्रन सक्छ । हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले सम्झौता समेत टुंगिन सक्छ । अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुहोला । ढिलासुस्तीले हातमा आएको मौका समेत गुम्न सक्छ । सगोलको सम्पत्तिमा विवाद आउने तथा भागबन्डा लाग्ने सम्भावना छ । परिस्थितिवश काम अधुरो रहला । नतिजा कमजोर देखिनाले विशेष काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।
कुम्भ -गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
साथीभाइ जुट्नाले काममा उत्साह जाग्नेछ र चाँडै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । दिगो काम बन्नुका साथै विशेष उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । सेवामूलक काम सम्पादन हुन सक्छ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन् । मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ । प्रयत्न गर्दा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । पराक्रम बढ्नेछ र प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न पनि सकिनेछ ।
मीन -दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
तार्किक क्षमता बढ्नेछ भने मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ । बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्छ । कामले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूको माध्यमबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ ।
२०७७ माघ ८ गते, बिहीवार, २१ जनवरी २०२१
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ९८४१३५२१६४
आज बुधबार, राशिफल हेरेर सुरु गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात
तपाईको आज (बुधबार) को राशिफल, आज यी चार राशिकाले दिनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,…
तपाईको आज मंगलबारको राशिफल भन्छ-आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
आज (सोमबार), राशिफल हेरेर सुरु गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको शुरुवात !
तपाईको आज (आईतबार) को राशिफल भन्छ-आज यी ७ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
आज शनिबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
तपाईको आज (शुक्रबार) को राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त विशेष फाइदा ?
सि.स. ६१ अधिकृत क्याडेट पदमा उर्तीण हुनेहरुको नामावली सार्वजनिक २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी…
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना ३ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
२ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्धारा…
उषाकिरणलाई नेतृ उर्मिला अर्यालको सुझाब – प्रतिगमनकारी बनेकी आमाबाट विद्रोह गर ! ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
माघ २१, काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ तथा…
इजरायलको भूमिमा अस्ताइन् एक नेपाली चेली १ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
११ फागुन, इजरायल । इजरायलमा कार्यरत एक नेपाली चेलीको अकस्मात…
Copyright © 2016-2021, All Rights Reserved - Sansar News | Powered By Goldenmud Creation